MamyPoko Air Fit
Mamypoko Premium Extra Dry Pants
MamyPoko Eco Pants Diaper
MamyPoko Pants Happy Day&Night
MamyPoko MyBaby Pants
မီးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ်ခန္ဓာ
Poko Chan GAME
စိတ်ထစ် နေသည့် မွေးဖွား ပြီးနောက် ဆီးထွက် ကျခြင်း
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်နှင့် မွေးဖွား ပြီးနောက် တော်တော် များများသော အမေ များသည် ဆီးထွက်
ကျခြင်း အဖြစ် များသည်။ရင်ထိတ် စရာ ပင်မဲ့လည်း သာမန် ကိစ္စ ဖြစ်သောကြောင့် စိုးရိမ် စရာ မလိုပါ။
ဘာကြောင့် မီးဖွားပြီးနောက် ဆီးမထိန်း နိုင်ရ တာလဲ?
ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ဆီးထွက် လွယ်သည်ကို သိပင် မဲ့လည်း မွေးဖွား ပြီးနောက် ဆီးထွက် လွယ်သည်ကို မသိသော အမေ များလည်း များသည် မဟုတ်လား? မသိ ခဲ့ရင် ကိုယ်တ ယောက်ထဲ ဖြစ်နေတာ ဘာ လား ဆိုပြီး စိတ်မ အေးဖြစ် မိမှာ သေချာ၏။ သို့သော် ဤကိစ္စ မျိုးသည် ဖြစ်ရိုး ဖြစ်စဉ် ဖြစ်သော ကြောင့် စိုးရိမ် စရာ မရှိပါ။ အခြေ အနေ အကြောင်း အရင်း သိရှိ ပါက စိတ်အေး နိုင်မည် ဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်တွင် ကြီးထွား လာသည့် သားအိမ်သည် သင်၏ ဆီးအိတ်ကို ဖိခြင်းကြောင့် ဆီးသွား မှူသည် အဖြစ် လွယ်လာသည်။ တဖန် မွေးဖွား ပြီးနောက် မှာလဲ သားအိမ်သည် ဆီးအိတ်ကို ဆက်လက် ဖိခြင်းကြောင့် ဒဏ်ရာ ဖြစ်စေကာ ဆီးသွား မှုသည် အဖြစ် လွယ်စေ၏။
(ဆီးထွက် လွယ်ခြင်း) လို့ကြား လိုက်သည့် အခါ (မဟုတ်မှ လွယ်ကော... ကိုယ်လား?) ဒါပင်မဲ့ လူအ များစု အနေဖြင့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်နှင့် မွေးဖွား ပြီးနောက် တွေ့ကြုံ ရမည်မှာ အထူး အဆန်း မဟုတ် ပါ။မွေးဖွား ပြီးနောက် ၃လ- ၄လ နောက်မှာ တော့ ဆီးအိတ်နှင့် သားအိမ်သည် နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်မှာ ဖြစ်သည့် အတွက် စိုးရိမ် စရာ မရှိပါ။
မွေးဖွား ပြီးနောက် ဆီးထွက် ကျခြင်းသည် ကလေး မွေးဖွား ချိန်တွင် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းတွင် အနာ တရ ဖြစ်ခြင်းသည် အဓိက အကြာင်းပင် ဖြစ်သည်။ တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ဆိုသည်မှာ တင်ပါးနှင့် အောက်တွင် ရှိသော သားအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ စအို အစ ရှိသော ဗိုက်ကို ထောက်ပံ့ နေသော အစိတ် အပိုင်း နှင့် ကြွက်သား၊ သွေးကြောမျှင် ကလေး များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားသည်။ ၎င်း တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းသည် လျော့ကျလျှင် ဆီးလမ်း ကြောင်းလည်း သေချာ ပိတ်ထားခြင်း မရှိ၍ ဆီးလဲ မထိန်း နိုင်ဘဲ ယိုကျ နိုင် သည်။
တဖန် ကလေး မွေးဖွား ချိန်တွင် ရရှိသော ဒဏ်ကြောင့် ဆီးလမ်း ကြောင်းနှင့် ဆီးအိတ်ရဲ့ ခံစား မှူကို သိပ်မ သိတော့ခြင်း၊ တခြားသော ဆီးမ ထွက်ခြင်း ပြဿနာ များလဲ ခံစား ရနိုင်သည်။ သို့သော် ဤ
ပြဿနာ များသည် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာပါက နဂို အတိုင်း ပြန်ဖြစ် လာပါ မည်။ ဆီးထွက် ကျမှူကို စိုးရိမ် ပါက အထူး ပြုလုပ် ထားသော pad များကို သုးံခြင်း ဖြင့်၎င်း ပုံမှန် အနေ
အထား ပြန်ရောက် နိုင်ပါသည်။
တင်ပါး ဆုံရိုး အောက်ပိုင်း ဝန်ပေါ့ စေရန်က?
မွေးဖွား ပြီးနောက် ဆီးထွက် ကျခြင်းကို ကာကွယ်ရန် တတ်နိုင် သမျှ တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းတွင် အနာ တရ မဖြစ်အောင် ဂရုစိုက် ရပါမည်။ ဆီးသွား ချိန်သည် တိုတောင်း ခြင်းက ကောင်း၍ အနာ တရ ဖြစ် နှုန်း နည်း၏။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်တွင် အဝ လွန်ခြင်းနှင့် သွေးတိုးခြင်း အစ ရှိသော တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းကို လေးစေ သောအကြောင်အ ရာများကို ရှောင်ကြဉ် သင့်သည်။ တဖန် အချိန ကိုက်၍ ဝမ်းဗိုက်မှ အသက်ရှူ ထုတ်ခြင်းဖြင့် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းတွင် အနာ တရ ဖြစ်ခြင်းကို လျော့ကျ စေ သည်။ အချိန် ကိုက်ခြင်းကို သက်ဆိုင်ရာ ဆရာ ဝန်က မမွေး ဖွားမီ ညွှန်ကြားချက် အတိုင်း လိုက်နာ ရန်။
မီးဖွား ပြီးနောက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဂရု စိုက်ခြင်း
သဘာဝ အလျှောက် ပျောက်ကင်း သွားမယ်လို့ ထင်ပေ မဲ့လည်း ဆီးထွက် ကျခြင်း ဒုက္ခကို နှုတ်ဆက် ချင်သည် မဟုတ် လား? အဲ့ဒီ အတွက် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာအောင် ဂရုစိုက် ရပါမည်။ မွေးဖွား ပြီးနောက် မည်သို့ နေထိုင်ရမည်ကိုသိလျှင် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ပြန်လည် ကောင်းမွန်ရန် နီးစပ် လာမည်။ အသေးစိပ် မည်သို့ နေထိုင် ရမည်ကို ဖော်ပြ ပါမည်။
ကလေး မွေးဖွား ခြင်းကြောင့် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ထိခိုက် မှုသည် မွေးဖွား ပြီးနောက် ၁လ ၂လ အကြာတွင် တဖြည်း ဖြည်း ပြန်လည် ကောင်းမွန် လာပါမည်။ အဲ့ဒီ အချိန် မရောက်မီ ထိကတော့ တတ် နိုင် သမျှ လဲလျောင်း၍ လေးသော ပစ္စည်း များကို မခြင်း မပြုလုပ် မိရန်။ လေးသော ပစ္စည်း များကို မ ရန်မှာ ၆ပတ်မှ ၈ပတ်ထိ အချိန် လိုအပ်သည်။ အဲ့ဒီ အချိန်ကို အတင်း လုပ်မည် ဆိုပါက နောက်ပိုင်းမှာ ဆိုးကျိုး များကို သတိပြု ရမည်။
မီးဖွားပြီး ချက်ချင်း ခါးစည်း မစည်း ပါနှင့်
ဟိုအ ရင်တုန်းက မွေးဖွား ပြီးနောက် ချက်ချင်း ဗိုက်ချပ် ခါးစည်းကို ဝတ်ပြီးနောက် တင်းကြပ်စွာ ချည် နှောင်လေ ကောင်းလေ ဟုထင်ခဲ့ သောလည်း၊ လက်တွေ့တွင် ဗိုက်ချပ် ခါးစည်းကို ဝတ်ခြင်းသည် ဆီး အိမ်နှင့် သားအိမ်ကို အောက်ကျ စေပြီး တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းရဲ့ ကြွက်သားနှင့် အရွတ်ကို ဒဏ်ရာ ရစေသည်။ မွေးဖွား ပြီးနောက် ၄ပတ် အတွင်းမှာ ဗိုက်ချပ် ခါးစည်း ဝတ်စင်မှုကို ရပ်တန့် သင့်သည်။ အလား တူစွာဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်း လှူပ်ရှား မှူများကို ရှောင်ကျဉ် သင့်သည်။
တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းရဲ့ ကြွက်သား သန်မာအောင် လုပ်ခြင်းဖြင့် ဆီးယို မှူကိုပြုပြင်နိုင်သည်။ နာကျင် မှုကို ပျောက်သည့် မျှော်လင့် ချက်ကို သတ်မှတ်ချက် ထားရအောင်။ တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း လေ့ကျင့် မှုကို တရက်ကို နှစ်ကြိမ် ၁၀မိနစ် ဆီဖြင့် နေ့စဉ် လှူပ်ရှားရန် အရေး ကြီးသည်။ အထူး သဖြင့် အခု လိုမျိုး လူသည် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်း ပျက်စီးမှူဖြစ်နိုင်ခြေ မြင့်မား သောကြာင့် လေ့ကျင့် သင့်သည်။
●ကိုယ်ဝန် ဆောင်ချိန်နှင့် မွေးဖွား ပြီးနောက် သေး ခဏ ခဏ ဆီးထွက် လွယ်သည်။
●မွေးဖွား နေချိန် သားအိမ်ခေါင်း ပွင့်၍ ကလေး ထွက်ဖို့ရန် အချိန် ကြာခဲ့သည်။ (၅နာရီ အထက်)
●၃၅၀၀g ကျော် ထွားကျိုင်းသော ကလေးကို မွေးဖွား ခဲ့သည်။
●မွေးဖွားပြီး ၁ပတ် အကြာတွင် သားအိမ် အောက်ဆိုက် လာသည်။
လက်ရှိ ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ရင် ကောင်းမ လဲလို့ ကြည့်ရအောင်။
အရင်ဆုံး အနေနဲ့ ဗိုက်ထဲမှာ အားထည့်ဖို့ ခက်တဲ့ အနေ အထား ကနေ စတင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁. ပက်လက် အိပ်သော အနေ အထားဖြင့်၊ ခြေထောက်ကို ခွဲထား၍ ဒူးနှစ်ဖက်ကို ကွေး၍ သက်တောင့် သက်သာ ခန္ဓာ ကိုယ်ကို ထားပါ။
၂. အဲ့ဒီ အနေ အထားဖြင့် တင်ပါးဆုံ အောက်ပိုင်းကို ၁မိနစ်ကို ၁၂ စက္ကန့်- ၁၄ စက္ကန့် ခြားဆီဖြင့် ညှစ်
ထုတ်ရန် (အကယ် လို့များ ဤနည်းသည် ခက်ခဲ နေပါက ၅စက္ကန့်ဆီ ညှစ်ရန်)။
စအို၊ သားအိမ်ခေါင်း၊ သားအိမ်ကို ညှစ်ထုတ် တဲ့အခါ အလုးံ ဆုံကို ဆွဲတင်တဲ့ ပုံစံဖြင့် အပေါ်သို့ မြင့် တက် လာအောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ဗိုက်၊ ခြေထောက်နှင့် ခါးဆီမှာ အားမ ဆိုက်မိရန် သတိ ပြုရ ပါမည်။
၃. ၁မိနစ်တွင် ၄၆-၄၈ စက္ကန့် လောက် ကျန်ရှိ နေတဲ့ အချိန်တွင် ခန္ဓာ ကိုယ်မှ အားများကို လျော့ချ လိုက်ပါ။
၄. အခု လိုမျိုးဖြင့် ၁၀ကြိမ်ကို ၁၀မိနစ် ဆီ ထပ်ခါ ထပ်ခါ ပြုလုပ်ရန်။
နေထိုင်မှု ဘဝ ထဲတွင်လည်း သက်တောင့် သက်သာဖြင့် လေ့ကျင့် နိုင်မှူ နည်းလမ်း များနှင့် မိတ်ဆက် ပေးမှာ ဖြစ်သည့် အတွက် လက်တွေ့ လုပ်ဆောင် ကြည့်ပါရန်။
၁. ထိုင်ခုံတွင် ကျောလယ်နှင့် ခါးကို ကပ်ထားပြီး အမှီ ပြုထား ရပါမည်။ ဤအ ချိန်တွင် ပခုံးမှ အားကို လျော့ထား ရမည်။
၂. အခြေခံ ကျသော လှူပ်ရှား မှူနှင့် အညီ ၁မိနစ် အတွင်းမှာ ၁၂-၁၄ စက္ကန့်ဖြင့် ညှစ်ထုတ် ရပါမည်။
၃. ၁မိနစ်စာ အတွင်း ကျန်ရှိ နေသာ အချိန်ကို ခန္ဓာကိုယ် အတွင်းမှ အားများကို လျော့ချ ရပါမည်။ တင်းကြပ် မှူနှင့် လျော့ချ မှူကို အမြဲ ၁၀ကြိမ် ပြုလုပ် ရပါမည်။
※ထိုင်နေတဲ့ အချိန်မှာ ဗိုက်နှင့် ခါးတွင် အား အလွယ် တကူ ရောက်ရှိနိုင်သည့် အတွက် ဗိုက်ပေါ်မှာ လက်တ ဖက်ကို တင်ထား ရပါမည်။ ဗိုက်ကြွက်သား မသုးံ မိစေရန် သတိပြု ရပါမည်။ လေ့ကျင့် မှုရဲ့ ထိရောက် မှုကို ကြ
ည့်၍ မနက်တိုင်း နည်းနည်း ကြိုးစားပြီး ဆီးထွက် ကျမှု မရှိအောင် လုပ်ရမည်။
ကြိုက်နှစ်သက်ပါသည်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာများထဲမှ ဖယ်ရှားမည်
ကျွနုပ်တို့ရဲ့ favorites features ဟာသင့်ရဲ့ brouser cookies ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍သင့်ရဲ့ iPhone သို့မဟုတ် iPad မှာSafari ကိုသုံးထားတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့ browsing Mode ကိုပိတ်လိုက်ပါ။အကယ်၍cookies ကိုဖျက်လိုက်မယ်ဆိုရင် သင်ရွေးထားတဲ့favorite ကိုလည်းဖျက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါမယ်။
အရွယ်အစား : L
အရွယ်အစား : XL
အရွယ်အစား : XXL
အရွယ်အစား : XXXL
MamyPoko My Baby Pant
အရွယ်အစား : S
အရွယ်အစား : M
စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ မတည်ြ...
ကလေးက အမျိုး မျိုးသော လှုပ...
ပထ မဆုံး အကြိမ် "ကိုယ်ဝန် များရှိ နေတာ လား?"
ကလေး၏ ပထ မဆုံး လှုပ်ရှားမှု
ကလေး ငယ်၏ လှုပ်ရှားမှု ဆိုတ...
မတ်တပ်ရပ် လမ်းလျှောက်ခြင်း အဆင့်
လမ်းပတ်လျှောက် နေတာတောင် ...
ပထ မဆုံး အကြိမ် ကိုယ် ခန္ဓာ ပြောင်းလဲ မှု
ဗိုက်က ကိုယ်ဝန် သည်နှင့် ...
မီးဖွား ပြီးနောက် "ရင်သား...
ပထမ အကြိမ် ကိုယ်ဝန် ရှိစ အော့အန်ခြင်း
အရမ်း ဆိုးရွားသည့် အော့အန...
သင့်ရဲ့  SNS နှင့် ချိတ်ဆက်လိုက်ပ
NewBorn / S
SS / S
L / XL / XXL / XXXL